Chinjana Chekutaura: Girazi inopa kupukunyuka kweMessi Barca - teles relay
By TELES RELAY On Feb 19, 2020
Iwindo rekutamisa nguva yechando rakavharwa, asi ikozvino ndiyo nguva yekutarisa kune zhizha! Heano runyerekupe rutsva runotenderera mushure mehusiku hwekufa kwaJanuary 31.
NYAYA YENYAYA: LAGI Inobvunza nezve kuwanikwa kweMessi
Izvo zvanyatso nyorwa zvakanaka izvozvi, asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka chaizvo pakati peBarcelona uye Lionel Messi mumavhiki mashoma apfuura nemwedzi. Masvondo maviri apfuura, kuputika pa Instagram kwakamutsa mukana wekuti abve mukirabhu.
Asi aizoendepi? Manchester City? Kudzokera kuNewell's Old Boys kirabhu yevasikana? Kana rondedzero kubva kune mutambi weArgentina Radio Continental ndiko kutenda, kwainoenda kunogona kuve MLS LA Galaxy kudivi.
Chirevo anoti maneja weGreen uye aimbove nyeredzi weBoca Juniors Guillermo Barros Schelotto akabata baba waMessi Jorge kuti vaone kukanganisika kwehukama hwemwanakomana wake neBarcelona uye kana paine mukana kuchinja.
LA Galaxy inonzi yakaongorora kufarira kwaLionel Messi kutamira kuMLS. François Nel / Getty Mifananidzo
Chibvumirano chaMessi chingasanganisira chirevo chekubuda chinomubvumidza kusiya Catalan mukupera kwemwaka wega wega, izvo zvaizomusiya akasununguka kujoina Galaxy - kana chero imwe kirabhu - chirimo ichi. Kungobata chete ndekwekuti iyo Los Angeles kirabhu yatove nevatambi vatatu vanonzi vapinda Javier Hernandez, Cristian Pavon et Jonathan dos SantosZvichireva kuti vatambi vashanu veMLS Cup vanofanirwa kugadzira nzira dzekubatanidza Messi mumubhadharo wemuhoro weligi.
Kufanirwa kukwikwidza mumutambo weChikwata cheChikwata kunogona kuita kuti Man United igovaniswe
Mapoinzi matatu chete akaparadzanisa neManchester United kubva pachina, Chelsea, iyo iri yechina uye yekupedzisira nzvimbo yakakodzera muPremier League mumutambo weChampions League, uye kukunda kwaRed Devils kukunda Londoners neMuvhuro manheru kungave kwakavapa simba rakakodzera. kubata uye kubata avo vakura. yenzvimbo mumakwikwi ekutanga ekirabhu muEurope.
Uye nezvechinangwa chekunyorera muzhizha ino, zvakakosha kuti zviite.
The Athletic inoshuma iyo United yakawanda yekutevera kwemwedzi yakawanda yeBorussia Dortmund nyeredzi Jadon Sancho inogona kupfupikiswa pamusoro penyaya yekuti hombe dzeChirungu dzinokodzera here Champions League. Kusakwanisa kwavo kupa chikamu mumakwikwi aya kwakavapa mukana wekusaina Erling Haaland muna Ndira, uyo akaita netsaona kukwikwidza kuDortmund nemusi weChipiri paakakunda Champions League achirwisa Paris Saint-Germain.
Nhau dzakanaka dzeMan United ndedzekuti vane zvimwe zvibodzwa zvekuvarwisa, avo vasingazoite senge pamwero wenhabvu yeEuropean sezvavaizotamba mukudonha. Jack Grealish angave Ole Gunnar Solskjaer Nha. 1 chinangwa chino zhizha, uye uyo ane makore makumi maviri nematatu haasarudzirwe nekuti kana Champions League iri kuOld Trafford mwaka unotevera.
Man United inozivisa vamiriri ve technical director chinzvimbo
Panogona kuve nekukurumidza paine mumwe munhu asiri Executive Executive Mutungamiriri Ed Woodward achinongedza nzira yekuendesa kuManchester United, maererano The rakazvimirira. Icho chinyorwa chinoshuma kuti mazita maviri paRed Devils kapfupi kune yavo nyowani technical director chinzvimbo Antero Henrique et Ralf Rangnick.
Henrique akapedza makore makumi maviri nematatu muPorto, wekupedzisira gumi nemumwe achitarisira DragoesKuvaka timu yekutanga. Iye ane makore makumi mashanu nemashanu ekutanga anga asingashande kubva munaJune, paakasiya chigaro semukuru wezvemitambo kuPSG, uye anonzi ari munhaurirano dzekumusoro kuti atore basa iri kuOld Trafford.
Nekudaro, kune vatambi vechikwata avo vanoda Rangnick, Red Bull's director director. Uyu ane makore makumi matanhatu nemashanu anofarira shanduko yake inotevera yekuenda kubasa kuti aende naye kuPremier League, iyo ine rombo rakanaka kune vehukama hwakabatana, AC Milan angadai akafarira masevhisi ake.
- Wechidiki Chelsea Samuel Iling-Junior inogona kusiya Stamford Bridge zhizha rino, Football Insider mishumo. Iye ane makore gumi nematatu ekuzvarwa anonzi ndiye mumwe wematarenda aCobham anovimbisa zvikuru, uye chibvumirano chake chakapera zhizha rino, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Ajax naSchalke kunze kwenyika kune mutengo wakadzikira.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/soccer-transfers/story/4055834/transfer-talk-la-galaxy-offer-lionel-messi-escape-from-barcelona-woes
Coronavirus denda rinoramba richikura, asi kupararira kuChina kunononoka - New York Times
Vagari vanotya kusvibiswa kunokonzera cancer. Sayenzi haina kuzviratidza.